Sawirro: Webiga Shabeelle oo isu bedlay dhul qallalan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wixii ka dambeeyey bilowga bishaan Maarso 2016, waxaa soo baxayey warar sheegaya in wabiga Shabeelle uu biyo beelay, sawirradii hore ee lasoo qaaday aamuujinayey wabiga oo ay ku hareen biyo aad u yar, oo meelaha qaar ay xoolo iska dhex socdaan, carruurna ku ciyaareyso.
Sawiraddii hadana lasoo qaaday todobaad kadib waxey muujinayaan wabigii oo wada qalalay oo gaadiid dhex marayo, arrintaas oo noqotay mid laga naxay.
Haddaba, kumanaan qoys oo ku nool deegaanada saaran hareeraha jiinka wabiga Shabeele ee gobollada wabigu maro ayaa xiligaan waxaa soo foodsaaray biyo la,aantii ugu xumeyd ee soo marta mudo ka badan sodan sano.
Dadka degan agagaarka wabiga ayaa noloshooda waxa ay ku xirneyd biyaha wabiga taasi oo ay u isticmaali jireen tacabka beeraha iyo nolosha guryahooda waxaana hada wabiga Shabeele uu yahay mid gebi ahaanba guray ama ay dhamaadeen biyahiisa.
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in halkaas lagu arkay caruur iyo haween haraad dartiis u qodanaya wabiga dhexdiisa si ay ugu helaan wax uun biyo.
Waxaa lasoo sheegayaa in tuulooyin dhowr ah oo ay kamid yihiin Maandheere, Bacaadley, Jiilaale, Xawaadleey iyo kuwo kale ay caruur ugu geeriyoodeen biyo wasaqeysan oo ay cabeen, waxaana deegaanadaasi kajira cudurka shuban biyoodka, iyadoo lagu jiro xilli aad u kulul.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabelaha Dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa qiray in Biyo la,aanta ay sababtay in ay ka dhasheen Cuduro Shuban biyoodka ka mid yahay iyadoo caruur ugu geeriyootay Tuulada Maandheere oo ka tirsan Tuulooyinka hoos yimaado Degmada Jowhar.
Gudoomiyaha Gobolka Shabelaha dhexe ayaa ugu baaqay Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo hey`addaha caalamka in kaalmo gar gaar Bani,aadanimo oo degdeg ahay la soo gaaraan dadka ku dhaqan Degmooyinka gobolka iyo deegaanada hoosyimaada isagoo si gaar ah ugu baaqay gudiga Gurmadaka Abaaraha ee dhowaan magacaawday Wasaarada Arimaha gudaha in ay gargaar gaarsiiyaan dadka ay saameysay abaarta.
Sababta: Ilaa hadda ma cadda sababta keentay in wabigu gebi ahaanba qalalo, oo laga waayo wax biyo ah. Horay waxaa caadi ahaan jirtay in wabigu uu biyo yareeyo bilaha Febaraayo iyo Maarso sanad kasta, marka la gaaro April-na uu biyo badan keeno.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in maadaama biyaha wabigu aad u yaraadeen ay dowladda Itoobiya sameysatay biyo keydiyeyaal badan, si beeraheedu aysan waraab u weyn xilliga jiilaalka, taasina keentay in biyo badan usoo gudbi waayaan dhanka Soomaaliya.
Wabiga Shabeelle ayaa sida ay sheegayaan waayo-joog hore wuxuu sidaan noqday labo jeer oo kala sanadkii 1975-tii iyo sanadkii 1984.
Sawirro wabiga Shabeelle laga qaaday horraantii Maarso 2016
Sawirradii ugu dambeeyey ee wabiga Shabeelle